Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ကို USB အလိုအလျောက်အားသွင်း, FM ရေ modulator တွေကိုများ၏စျေးနှုန်း ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများမိုဘိုင်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများXiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ကို USB အလိုအလျောက်အားသွင်း, FM ရေ modulator တွေကို
ကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်း, GPS, မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များမိုဘိုင်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇူလိုင်လ 2019 15 17: 00
စျေးနှုန်းသမိုင်း Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ဂီတမော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ
€ 14,99 - 20183အောက်တိုဘာလ
€ 11,53 - 2018 စက်တင်ဘာလ 30
€ 14,99 - 2018 စက်တင်ဘာလ 16
€ 11,53 - 2018 စက်တင်ဘာလ 8
€ 12,41 - 2018 စက်တင်ဘာလ 5
€ 14,99 - 2018 30 သြဂုတ်လ
€ 12,41 - 2018 20 သြဂုတ်လ
€ 13,04 - 2018 17 သြဂုတ်လ
မှ: ဇူလိုင်လ 2018 17
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 14,99 - 2018 17 ဇူလိုင်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 4,21 - 20185သြဂုတ်လ
Xiaomi က ROIDMI 3S ဘလူးတုသ်ဂီတမော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ
refurbished ROIDMI3Dual-USB port ကဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ (Xiaomi ကဂေဟစနစ်ကုန်ပစ္စည်း)
ROIDMI3ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ (Xiaomi ကဂေဟစနစ်ကုန်ပစ္စည်း)
[ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်] မူရင်း Xiaomi က Roidmi3ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာဗုံးစအမျိုးအစားနဲ့ Fit အားလုံးသည်ကားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ...
စမတ်ဂီတ Player ကို app ကိုအတူ Xiaomi က ROIDMI / ROIDMI 3V5/ 3.4 FM ရေကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုမော်တော်ကားကို USB အားသွင်းကိရိယာ ...
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများအတွက် Xiaomi က ROIDMI3BFQ04RM Dual-USB အဘလူးတုသ်ဂီတမော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ
Xiaomi က Roidmi ဘလူးတုသ်ကား Kit35 3.4V Dual-USB မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ MP3 Player ကိုကြိုးမဲ့ FM ရေ Xiaomi က ...
iPhone နှင့်စမတ် Android အတွက် Xiaomi က ROIDMI35 3.4V မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ FM ရေစမတ်ဂီတ Player ကို app ကို ...
Xiaomi က ROIDMI3iPhone နှင့် Android အတွက်53.4V ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ FM ရေစမတ်ဂီတ Player ကို app ကို ...
မူရင်း Xiaomi က ROIDMI 3V53.4 Dual-USB မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာကြိုးမဲ့ FM ရေ Bluetooth ကိုကား MP3 Player ကိုအတူ ...
ROIDMI 3S ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာသင့်ရဲ့မောင်းနှင်မှုလမ်းခရီးဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေပေးပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာ 3.4A output ကိုသင့်ရဲ့အီလက်ထရောနစ် device များအတွက်အစာရှောင်တာဝန်ခံမြန်နှုန်းသေချာ, ထို့နောက်ဘလူးတုသ် MP3 ကစားသမား function ကိုသင်လမ်းပေါ်တွင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားထောက်ခံပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အဗို့ Display, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာဘက်ထရီအခွအေနေလူသိများလာမောင်းနှင်မှုများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံစေတယ်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
●သတ္တု elastic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအားလုံးနီးပါးကားများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကားစီးကရက်မီးခွ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကြောင့်စိတ်ပူစရာမလို, iPhone ကို Samsung, Huawei နှင့်အခြားအစမတ်ဖုန်းများအတွက်ဝတ်စုံ
Music ကို MP3 ကစားသမားများနှင့်အားသွင်း:
●ဂီတနားထောင်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအားသွင်း, အလိုအလြောကျအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဂီတ play, (အမှန်တကယ်ခွအေနအေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, 96.4MHz ဖို့ FM ရေညှိ) Bluetooth မှတဆင့်ဖုန်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ကားတစ်စီးစတီရီယိုထံမှဂီတနားထောင်နိုင်သည်
● Dual-က USB port 5V 2.4A, တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခု device များအတွက်တစ်ခုတည်းသော max ကို output ကိုအားသွင်းထားနိုင်ပါတယ် 3.4A
●ကားတစ်စီးဗို့ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်တဲ့အခါ, ROIDMI 3S ၏အနီရောင်သတိပေးအလင်းမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်စောင့်မမည်နှင့်နှိုးဆော်သံအသံကထုတ်လုပ်မည်, အတောအတွင်း, APP ကို၏ဖုန်းကိုဒေတာ synchronous နှစ်ချက်သတိပေးကြောင့်ပြသပါလိမ့်မယ်, မောင်းနှင်မှုအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်
သေးငယ်ဒီဇိုင်းပေမယ့် Multi-function တွေကို:
ကားတစ်စီး / ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းထုတ်လွှင့် / APP ကိုစမတ်ဝေးလံသောအဘို့●ဂီတကစားသမား / FM ရေ transmitter ကို / ကားတစ်စီးတာဝန်ခံ / ဘက်ထရီမော်နီတာ
● FM ရေအကြိမ်ရေ: 87.5 - 108.0MHz
အနှစ်ချုပ်များ (ကားအားသွင်းကိရိယာ): 12 - 24V
output (မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ): 5V 2.4A (။ မက်စ် 3.4A) / 5V 2.4A (မက်စ် 3.4A ။ )
ကားအမှတ်တံဆိပ်ရန် Apply: Universal
အလုပ်လုပ် Temp (℃): 10 - 60 Deg.C ။
ပစ္စည်း (Cable ကို & Adapter ကို): သံမဏိ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 0.0320 ကီလိုဂရမ်
package အလေးချိန်: 0.0560 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို) x ကို 6.50 2.60 2.60 စင်တီမီတာက x / x ကို 2.56 1.02 1.02 လက်မ x
package အရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို) x ကို 8.50 8.50 3.00 စင်တီမီတာက x / x ကို 3.35 3.35 1.18 လက်မ x
Package Contents: 1 x ကိုကားအားသွင်းကိရိယာ, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x
Xiaomi က Roidmi 3S ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | သင့်ရဲ့ FM ရေ transmitter ကိုရှေးခယျြမှု
ဆုံးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုပြန်ဆန်းစစ် Xiaomi က ROIDMI 3S Xiaomei ခြင်းဖြင့်အားသွင်းအစွမ်းထက် FM ရေ transmitter ကို + ကားတစ်စီး►!
ခြုံငုံသုံးသပ်ရန် Xiaomi က Roidmi 3S ။ FM ရေ transmitter ကို။ ကားများအသုံးဝင် gadgets ။ အသေးစိတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း + စမ်းသပ်ခြင်း Xiaomei
Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ - GearBest
Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ကို USB အလိုအလျောက်အားသွင်း, FM ရေ modulator တွေကိုဗီဒီယိုများ
€ 16,89 - 20183အောက်တိုဘာလ
€ 12,99 - 2018 စက်တင်ဘာလ 30
€ 16,89 - 2018 စက်တင်ဘာလ 16
€ 12,99 - 2018 စက်တင်ဘာလ 8
€ 13,99 - 2018 စက်တင်ဘာလ 5
€ 16,89 - 2018 30 သြဂုတ်လ
€ 13,99 - 2018 20 သြဂုတ်လ
€ 14,69 - 2018 17 သြဂုတ်လ
အဘို့အ 308 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ကို USB အလိုအလျောက်အားသွင်း, FM ရေ modulator တွေကို
က Denis - ဇွန်လ 2019 11
တကယ်တော့ကိုယ့်ငါ့ဖုန်းများအတွက်အရည်အသွေးကောင်းကားကို charger ကိုရရှိရန်ရည်မှန်းခဲ့သည် ... ကျွန်မ ပို. တယ်။ အဆိုပါတည်ဆောက်အရည်အသွေးကိုတကယ်ကောင်းလှ၏။ ကမှာတောင်မှတစ်ဦးပထမတစ်ချက်သင်သည်ဤစက်ကိရိယာများ၏အရည်အသွေးတခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ကူးကိုပေးသနား။ အဲဒါကို set up လုပ်ဖို့သင် (ဂူးဂဲလ် appstore မှငါ့မှာ Android ၏အမှု၌) သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ROIDMI app ကို install လုပ်ဖို့ဂုဏ်နလိုအပ်ချက်နေနှင့်အခြားအရာအားလုံးရှေ့ဆက်တော်တော်လေးဖြောင့်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ရိုးရိုး BT ကွန်နက်ရှင်။ အဆိုပါအသံအရည်အသွေးကောင်းလှ၏။ တစ်ဦးပိုင်အဖြစ်လွယ်ကူသောရှင်းရှင်းလင်းလင်း FM ရေဘောင်ပေါ်အတွက် Tunning ။ အကောင်းတစ်ဦးကို Android music player ကိုငါ dub ဂီတ Player ကို (အကြံပြုhttps://play.google.com/store/apps/details?id=hr.palamida&hl=sr) ။ ဒါဟာ ... ရိုးရိုးစူပါင်က crossfading ပြီ, အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစက်ကိရိယာများအတွက်ဒါဟာအလွန်ပူနွေးထောက်ခံချက်။ ပထမဦးစွာတဦးတည်းဒါဟာ 16MP တောင်မှကင်မရာနှင့်အတူငါကအကောင်းတစ်ဦးစာဖတ်ခြင်းရနိုင်ဘူးဒါကဒါကြောင့်အလွန်သေးငယ်သောရဲ့ ... app ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် QR ကုဒ်ကိုဖြစ်ပါသည်: ကောင်းပြီ, အနည်းငယ်ပြဿနာများ Miner ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အတူကိုယ့်ကိုကိုယ်အနှောက်အယှက်မဖြောင့် appstore မှသွားနှင့် ROIDMI ကိုရှာ။ ဒုတိယအချက်ကြောင့်ငါ၏အကားတစ်စီးအကြောင်းကိုင်သို့မဟုတ်ပါကအခြားအရာတစ်ခုခုသည်မှန်လျှင်, ငါမသိပေမယ့်ဘက်ထရီကိုမော်နီတာ (15,6 V ကိုအားသွင်းထောက်လှမ်း) ကို overcharges ပေါ်မှာငါ့ကိုသတိပေးစောင့်ရှောက်။ ငါကနှောင့်အယှက်မယ့်အဖြစ်ကကို turn off ခဲ့ရသည်။ တတိယတဦးတည်း handsfree နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် ... ကောင်းပြီငါကစတူးဖို့န်းကျင်တယ်မလာကြပေမယ့်ပုံအဘယ်သူမျှမမိုက် device ကိုအတွင်း installed ငါဖုန်းခေါ်ဖြေဆိုသည့်အခါငါ့အကားတစ်စီးထဲတွင်စပီအသံမရှိလည်းမရှိ။ ငါနောက်ထပ်ကြောင့်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် ... ငါ့အ setup ကိုနှင့်အတူတစ်ခုခု Be ဖြစ်ရမည်။
PUBG - ဇွန်လ 2019 11
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ● Dual-က USB port ကိုသင်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ 3.4 dual-ဆိပ်ကမ်းများ, 95 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိပြောင်းလဲမှုနှုန်းမြန်ဆန်မြန်နှုန်း●ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ devices တွေကိုအားသွင်း●များအတွက်တစ်ပြိုင်နက်● Intelligent ဆူညံသံ HD ကိုသံကိုဖျက်သိမ်းပြီးနှစ်ခု devices များ, တဦးတည်းအချိန် pair တစုံကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ် ●ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်း, ဗို့အားစောင့်ကြည့်ဖို့အချိန်နှင့်တပြေးညီ● (အမှန်တကယ်ခွအေနအေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, 96.4MHz ဖို့ FM ရေညှိ) Bluetooth မှတဆင့်ဖုန်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ကားတစ်စီးစတီရီယိုထံမှဂီတကိုနားထောင်နိုင်သလား: အလိုအလျောက် (Roidmi ဂီတအပြာရောင်ကို C ဘလူးတုသ်အမည်) ကို restart လုပ်ပါ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသတင်းစကားဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ကွန်နက်ရှင်နဲ့● FM ရေအကြိမ်ရေပယ်ဖြတ်ဖို့မလှယျကူအဘို့အပုံမှန်မဟုတ်သောအခွအေနေ● stretchable သံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်ပေါ်ရန်လိုက်တဲ့အခါ: 87.5 - 108.0MHz